Koorsooyinka Tababarka SAP ee ugu quruxda badan ee aad maqli doontaan
Koorsooyinka Tababarka ee ugu wanaagsan ee ku saabsan SAP ERP waxaad mar waliba maqli doontaa
SAP waxay ku taallaa mawduuca ugu muhiimsan ee abaaraha. Barnaamijka ugu weyn ee suuqa ee barnaamijka codsiga ganacsiga, SAP Tababar wuxuu ka caawiyaa ururada inay la dagaallamaan saameynta waxyeellada dabiiciga ah, waxay soo saartaa albaab cusub oo furan oo lagu hormarinayo horumarka iyo horumarinta, waxayna ku sii jiri doonaan mucaaradka hortiisa.
Sii shaqaalahaaga shaqaalaha macluumaadka iyo dabacsanaanta ay tahay in ay ballaariso awoodda qorshahaaga SAP - iyadoo la socdo koorasyada tababarrada, mashaariicda tababarka, iyo shahaadooyinka SAP. Samee qorshe tababareed oo dhammaystiran, ku xir dhammaan macaamiisha ku nool noolaha, webka, iyo koorsooyinka la qaadan karo - iyo barnaamijkii ugu dambeeyey ee barnaamijka taageerada iyo kartida cusub ee ururkaaga. waxaa laga yaabaa in koorsada Tababarka SAP ee ugu qurxan iyo shahaadooyinka lagu caddeeyey hoosta:
SAP SD (Sales & Distribution) Tababarka & Shahaadada
SAP Project Systems (PS) Tababarka & Shahaadada
SAP Basic FICO Tababarka & Shahaadada
SAP 01 Applict Training & Certification
SAP - MM Tababarka iyo Shahaadada
SAP - HCM Tababarka & Shahaadada
SAP - HANA Tababarka & Shahaadada
SAP - Horumarinta FICO Tababarka & Shahaadada
Tababarka SAP - ABAP Training & Certification
SAP Tababarka Tababarka iyo Shahaadada
1. Isuduwaha Codsiyada SAP - Shahaadooyinka iyo Qeybinta, ERP 6.0 EhP6 Training
2. Isuduwaha Codsashada SAP - Nidaamka Mashruuca ee Tababarka SAP ERP 6.0 EHP4 Training
3. Tababar Tababarka SAP
4. Tababar SAP Basic Basic FICO
5. Tababbarka Codsiga SAP 01
6. SAP - PM - Hawlaha Ganacsiga ee Tababarka Dayactirka Caawinta
7. SAP MM - Tababarka Maareynta Qalabka SAP
8. Tababarka SAP HCM - Tababarka Maamulka Sare ee SAP
9. Tababarka SAP HANA
10. SAP - Horumarinta Tababar FICO
11. Tababarka SAP - ABAP
SAP ERP Sales and Distribution wuxuu bixiyaa jawaabta maareynta macaamiisha oo dhan ee ganacsiyada ballaaran. Waa qayb ka mid ah habka isuduwidda ee xoojinaya macaamiishaada, laga bilaabo qaylo-dhaan, dalabyo ribo ah iyo masaafada u dhexeysa ee macaamiisha. Waxaa si adag loo dhexgeliyaa qaybaha mashaariicda MM iyo PP-ga. Waxay u saamaxeysaa ururada in ay ku daraan qiimaha macaamilka macmiilka, hubi codsiyada furan iyo qiyaasta iyo wixii la mid ah.
Imtixaanka shahaadada 'Esat Xaymuska EhP6.0' waxay hubineysaa in codsadaha uu leeyahay barashada degaanka Maareynta Dalabka Sales for profile professor. Axdiga Tani waxay muujinaysaa in tartameedku leeyahay faham asaasi ah oo ku dhexjirta khabiirkan khibradda leh, waxaana uu si dhab ah u fulin karaa waxbarashadan mashaariicda.
Si loo xaqiijiyo guul gaadhka, Tababarka SAP wuxuu soo jeedinayaa inuu ku biiro koorsooyinka tababarka iyo kaqaybgalka gacanka inuu qorsheeyo imtixaankaaga shahaadada ah sida su'aaluhu waxay tijaabin doonaan kartidaada si aad u isticmaasho macluumaadka aad tababar ku qaadatay.
Laguuma oggola inaad isticmaashid qalab kasta oo tixraac ah adoo ku jira imtixaanka shahaadaynta (aanad galin dukumiintiyada interneetka ama qaab kasta oo SAP ah).
Tijaabinta shahaadaynta caddaynta waxay xaqiijineysaa muujinta awoodaha iyo macluumaadka muhiimka ah ee kala duwan ee Nidaamka Mashruuca SAP ERP. Waxay muujinaysaa in tartameedku leeyahay faham guud oo wanaagsan oo ku dhexjira khabiirkan takhasuska ah, wuxuuna u adeegsan karaa barashadan oo dhan ujeedada iyo ujeedooyinka iyada oo la raacayo lataliyaha dhammeystiran. Kalsooni Tani waxay ballaarineysaa waxbarashada aasaasiga ah ee ay soo qaadatay waayo-aragnimo aan qaas aheyn iyo waxyaabo badan oo ku xeeran. Waxay kuxirantahay waxbarashada oo ku jirta koorasyada aasaasiga ah waxayna ku nuuxnuuxsadeen habka qaabaynta qaab dhismeedka.
Si loo xaqiijiyo guul gaadhka, Tababarka SAP wuxuu soo diyaariyaa xoojinta koorsooyinka tababarka iyo fahamka gacansiinta si aad ugu diyaargarowdo imtixaanka shahaadada si aad u baari karto karti-xirfadeedkaaga si aad u isticmaasho macluumaadka aad tababarka ku qaadatay.
Qorshaha mashaariicda dhejiska iyo qalabyada bixiya saldhigga qarsoon ee awood u siinaya codsiyada in ay si wada jir ah ula shaqeyn karan habka shaqada. SAP Basis waxay ku dhex jirtaa RDBMS, GUI, iyo macaamiisha macaamiisha. Ka dib qeybtii interface ee Basis, waxa intaa dheer ku dareysa qaybahaas sida macnaha ereyga iyo macmiilka dheeraadka ah ee macaamilka iyo qaab dhismeedka. Dhismuhu waa qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka SAP. Waa qayb ka mid ah dhexdhexaadinta kaas oo isku xira arjiga xogta iyo habka shaqada. Dhismuhu badiyaa wuxuu ku xiran yahay interface GUI si SAP ah.
Si wanaagsan loo habeeyey SAP FICO Tababar oo uu macallin ku guuleysto si loo helo gacansi maaliyadeed oo badan oo ku saabsan barashada aqoonta. Saacad kasta oo cinwaan ah waxaa jira afar saacadood oo waxqabad ah. Maaliyadaha (FI) iyo kontoroolka (CO).
FI wuxuu ku darayaa waajibaadka deynta, sheegashada deymiska iyo rikoodhka guud, habka loo isticmaalo xisaabaadka boostada, buugaagta ku dhow, u diyaari sharaxaad lacageed iyo warbixinta hantida. Xisaabaadka iyo Maareynta Lacageed ee Lacagta ayaa la barayaa sida koorso lagu barto Barashada SAP
Baraha 3 ee tababarka maalinlaha wuxuu bilaabmayaa isagoo caddaynaya ereyada ay adeegsadeen SAP - waa nuts iyo bolts. Waxay dib u eegis ku sameysaa qorshaha ganacsiga ee SAP iyada oo la dhisayo habka wax barashada SAP ee muhiimka u ah taageerada koorsooyinka SAP oo dheeraad ah. SAP 01 wuxuu muujinayaa fikradaha aasaasiga ah, kartida iyo faa'iidooyinka SAP NetWeaver, SAP ERP, SAP Business Suite, iyo Nidaamyada Ganacsiga ee SAP, ka caawinta kooxda sidii loo kala soocayo una habayn lahaa isticmaalka muhiimka ah ee SAP.
Koorsada Tababarka SAP waxay ku lug leedahay hawlo dhawr ah oo ka faa'iideysanaya qaybaha SAP ERP (gaar ahaan ECC6.0, BW). Sidoo kale waxay muujineysaa qaybo dheeraad ah.
Waxay noqon laheyd mid aad u fiican haddii aad ka fiirsato in koorsada intaa dheer ay qaadato qaybaha ERP Release R / 3 4.6C iyo SAP R / 3 Enterprise.
Nadiifinta warshad aad u fiican ayaa muhiim u ah awoodda ururku ku hagaajin karo iyo kala soocida foomamka abuurista. Ururada ka faa'iideysanaya qaabka SAP ee R / 3, isticmaalka ku-meel-gaadhka ah iyo isticmaalka Qalabka Dayactirka (PM) qaybteeda wuxuu ku hadlaa habka faa'iido leh oo faa'iido leh. Tababarkan PM wuxuu bixiyaa naqshad la taaban karo qaybtan yar ee aan weli qotodheereyn, wuxuuna siinayaa buug aad u badan oo ku salaysan munaasabadda PM.
Laga bilaabo baaritaanka asaasiga ganacsiga ee muhiimka ah PM waxtarka aasaasiga ah, Mawduuca PM wuxuu horay u sii wadayaa inuu daboolo dhamaan qaybaha muhiimka ah ee diyaarinta iyo fulinta taageerada R / 3. Qadar gaar ah ayaa la siiyaa in lagu daro taageerada dhirta iyada oo loo marayo habka nidaamka caadiga ee ururka.
Koorsadan tababarka SAP waa aasaas aasaasi u ah koorsooyinka dayactirada ee la socda: PLM305, PLM310, PLM315, PLM318, iyo PLM320
SAP MM Module waxaa si buuxda loogu dhexgeliyaa qaabab kala duwan oo ku jira qaabka SAP R / XUMKA, tusaale ahaan, Maaliyadda (FI), Xakameynta (CO), Sales and Distribution (SD) iyo kuwo kale. Waxay hoos u dhigeysaa dhamaan maareynta maareynta qalabka SAP - qalabka wax ka qabashada, diyaarinta iyo xakameynta, gadashada, alaabada helitaanka, maareynta kaydka, iyo shahaadada rasiidka.
Hirgeli kartid, soo jiid, iyo dhisida kartidaada - hannaanka manhajka bani'aadanka (HCM) ee barnaamijka SAP SuccessFactors. Qorshayaasha maareynta hantida bani-aadmiga ee ku salaysan dariiqa ayaa sii kordhay shuruudaha shaqaale badan oo adduunyo ah, caalami ah iyo shaqaale aan la fileynin. Ka faa'iideysiga qalabka kombiyuutarka ee ku saabsan baqshiishada, ballanqaadka shaqaalaha, ballanqaadka, iyo cirka ayaa ah xadka halkaas ka jira. Waxyaabaha kale, dhiiri galiya dhaqanka barashada joogtada ah iyo horumarinta khubarada ee ganacsiga ka sii fiican.
SAP HANA waa marxaladda isbedelka, marxalad joogto ah ee falanqaynta iyo codsiyada. Iyadoo horumarinaysa xayeysiiska IT-ga, waxay siinaysaa qaybaha awooda sida: xawaaraha diyaarinta ee weyn, awoodda lagu maareeyo macluumaadka weyn, awooda hore iyo awoodda macdanta.
SAP HANA waxay bixisaa marxaladda lagu soo saarayo qorshe kale - qorshe wax ku ool ah oo lagu gaarsiinayo horumarinta dunnida iyada oo aan wax dhib ah lahayn.
SAP Hana waxay ku habboon tahay fulinta falanqsi soconaya iyo abuurista iyo dirista codsiyada joogtada ah. Si dhakhso ah ayaan uga bilownay inaan soo ururinno tiro fara badan oo macluumaad ah oo loogu talagalay ujeedooyinka shaxda, injineerku wuxuu xaqiiqsaday in macluumaadka dhaqdhaqaaqa loo sii marinayo CPU, oo leh xawaare sugan, waxay noqon doontaa imtixaan. Inkastoo xaqiiqda ah in Dhibaatooyinka Hard Disk ay si dhakhso ah u socdaan islamarkaana aaney ku filneyn dhaqso. Hadda oo ay SAP HANA tahay warbixin ay caadi ahaan u qaadatay saacadaha 24 si ay u soo saaraan nidaamyo adag oo adag oo wareegsan oo aan si sax ah u qaadin.
Si habeysan oo loo habeeyey SAP FICO Tababar oo uu baranayo baraha guuleystey ee gacmooyin badan oo hodan ku ah barashada aqoonta. Saacad kasta oo cinwaan ah waxaa jira afar saacadood oo waxqabad ah. Nidaamka SAP FICO wuxuu ku darayaa liiska 2 ee faa'iidada laga filayo in uu hirgaliyo diiwaannada la xidhiidha ururada - Maalgeliyeyaasha (FI) iyo kontaroolidda (CO).
FI waxay ku jirtaa qandaraasyada deynta, sheegashada deymiska iyo diiwaanka guud, hababka kale ee loo diro koontooyinka, buugaagta ku dhow, diyaar u sharax sharaxaad ku saabsan lacagta iyo warbixinta hantida.
Barnaamijka Codsiyada Ganacsi Sare (ABAP) waa lahjad barnaamij ah oo loogu talagalay abuurista codsiyada SAP (Nidaamyada, Nidaamka, Codsiga) R / 3, qaabka guud ee nidaamka nidaamka ganacsiga. ABAP waa diidan tahay barnaamijka.
Qeexitaannada macluumaadka (metadata) ayaa la sameeyaa oo la kormeerayaa Luqadda ABAP. Luqadda ABAP waxay u oggolaaneysaa sawir focal ah tirada tirada badan ee macluumaadka loo adeegsado qayb ka mid ah qaab-dhismeedka iyada oo aan loo baahnayn shaqeyn. Xogta cusub ama la bedelay waxay ku koobnayd dhammaan qeybaha qaabdhismeedka. Tani waxay dammaanad qaadaysaa ixtiraamka macluumaadka, isweydaarsiga macluumaadka iyo ammaanka macluumaadka.
Jadwalka waxaa lagu gartaa Qaamuuska ABAP oo si xor ah u kaydiya xogta. Miis oo leh qaab isku mid ah ayaa markaa laga sameeyaa qeexitaanka miiskaan ee xogta qarsoon.
Qeexida miiska ee Aaladda ABAP waxay ka kooban tahay qaybaha la socda:
Meelaha miiska waxay tilmaamayaan magacyada beeraha iyo noocyada macluumaadka ee goobaha ku jira miiska.
Furayaasha fog waxay calaamad u yihiin xiriirinta u dhexeeya miisaska.
Goobaha khaaska ah waxay xakameynayaan sida miisaska loo baahan yahay in lagu sameeyo diiwaanka.
Maxay yihiin SAP Modules? Liistada SAP ERP Modules